CeleLove - Page 117 of 228 - Welcome From Cele Love
၄နှစ်သမီးလေးအား လူမဆန်စွာ အဓမ္မကျင့်ကာ သတ်ပြီး ရေကန်ထဲပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ သေဆုံးသူ မနှင်းကဗျာ သတင်းနောက်ဆက်တွဲ
၄နှစ်သမီးလေးအား လူမဆန်စွာ အဓမ္မကျင့်ကာ သတ်ပြီး ရေကန်ထဲပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ သေဆုံးသူ မနှင်းကဗျာ သတင်းနောက်ဆက်တွဲ ကျိုက်ခမီမြို့တွင်ဖြစ်ခဲ့သော ၄ နှစ်သမီးအား လူမဆန်စွာ အဓ္ဓမ ကျင့်ကာသတ်ပြီး ရေကန်ထဲပစ်ချခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ ယမန်နေ့က ကျိုက်ခမီမြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓမ္မ ပြုကျင့်၍ ရေကန်ထဲ […]
အိမ်ကမိန်းမ ကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ.. အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ (ဘာသာပြန်) အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် …… ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ […]
ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ.. မိန်းကလေးတုိုင်းဟာ အချစ်ရေးမှာကံကောင်းချင်ကြပါတယ်။ ကုိုယ့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှု၊ ဂရုစုိုက် မှုပေးနုိုင်ပြီး သစ္စာရှိတဲ့ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ပဲ ဆုံဆည်းချင်ကြပါတယ် …… ။ အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ ကုိုက်ညီတဲ့ချစ်သူကောင်လေးမျိုးကုို ရထားပြီးပြီဆုိုရင် သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကြားမှာပါ သင့်ကုိုဝိုင်းပြီးအားကျရမယ့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချစ်ရေးကုို ပုိုင်ဆုိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် […]
အားထုတ်စရာတောင်မလိုဘဲ လူတစ်ဖက်သားအပေါ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ဆုံး ရာသီခွင်(၃)မျိုး
အားထုတ်စရာတောင်မလိုဘဲ လူတစ်ဖက်သားအပေါ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ဆုံး ရာသီခွင်(၃)မျိုး ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ကိုသူများကလာပြီး လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်တာမျိုးကို ကြိုက်လည်းမကြိုက်သလို လက်လည်းမခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကို အလိုလိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့လူမျိုးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေက သူများကို ချုပ်ကိုင်ဖို့ တကူးတကအားထုတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဒီတိုင်းနေရင်းနဲ့ကို တစ်ဖက်သားအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိနေတာမျိုးပါ။ ဒါဆို သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေများဖြစ်နေမလဲ၊ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ….. ။ (၁) […]
ထိခိုက်လွယ်ပြီး ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေမသိတဲ့အရာ (၈) ခု
ထိခိုက်လွယ်ပြီး ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေမသိတဲ့အရာ (၈) ခု အရမ်းကြံ့ခိုင်ပါတယ်လို့ ထင်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်တမ်းမှာကျတော့ အရမ်းကိုထိခိုက်လွယ်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မာကျောနေတဲ့ အပြင်သဏ္ဍာန်တွေနောက်ကွယ်မှာ နူးညံ့လွန်းတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ ထိခိုက်လွယ်ပြီး ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေမသိတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကိုပိုပြီးနားလည်ပေးနိုင်အောင်လို့ပါ …. ။ (၁) ထိခိုက်လွယ်ပြီး ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေဆိုတာ သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း […]
အပေါင်းအသင်းနည်းတဲ့သူတွေဟာ အင်မတန်ဥာဏ်ရည်မြင့်သူတွေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ…
အပေါင်းအသင်းနည်းတဲ့သူတွေဟာ အင်မတန်ဥာဏ်ရည်မြင့်သူတွေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ… သင်ဟာတစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ်တော်ကွဲထွက်နေတယ်လို့ တစ်ခါတလေခံစားရပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းပါပဲ။ သင်ဟာအပေါင်းအသင်းမတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥာဏ်ရည်အရမ်းမြင့်နေလို့သာဖြစ်ပါတယ် NCBI ရဲ့ သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ ဥာဏ်ရည်အရမ်းမြင့်မားတဲ့သူတွေဟာ အပေါင်းအသင်းနည်းပါသတဲ့။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၊ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ နေပျော်လို့ဖြစ်ပါတယ် ….. ။ Satoshi Kanazawa […]
သတိထားသင့်တဲ့ အရာလေးမို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်…ကလေးတွေကိုထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပြီး အပြစ်မပေးကြပါနဲ့….
June 6, 2019 Cele Love 0
သတိထားသင့်တဲ့ အရာလေးမို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်…ကလေးတွေကိုထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပြီး အပြစ်မပေးကြပါနဲ့…. ၂၀၀၆ ခုနှစ် တစ်ဦးတည်းသော သားလေး ဦးဏှောက်ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ မန္တလေးဦးဏှောက်နှင့်အာရုံကြော ခွဲစိတ်ကုသဆေးရုံကြီးမှာ တနှစ်နီးပါးတက်လိုက်ရတယ် ဆရာဝန်ဆရာမ များအထူးဂရုစိုက် ကုသပေးကြပေမယ့် ၂၀၀၇ နှစ်စ ပိုင်းမှာပဲ ဆုံးသွားခဲ့ရှာတယ် ကလေးဆုံးသွားပေမယ့် ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ တွေအများကြီးရလိုက်ပြီး ခုထိလည်း […]
စိတ်အင်အားကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေသာ ဒီအချက်တွေကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲနေနိုင်တာပါ
စိတ်အင်အားကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေသာ ဒီအချက်တွေကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲနေနိုင်တာပါ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး သန်မာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်လို နေထိုင်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ ပြိုလဲမသွားဘဲ ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ စိတ်အင်အားမျိုး ရှိတာကို ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။ အဲ့ဒီလို အမျိုးသမီးတွေက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ သူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်ပြီး […]
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဆယ်လီ လူပျိုသိုးကြီး(၆) ယောက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဆယ်လီ လူပျိုသိုးကြီး(၆) ယောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဆယ်လီတွေထဲကမှ အခုထိ အစွံ့မထုတ် ရသေးတဲ့ အမျိုးသားဆယ်လီ လူပျိုကြီးတွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထဲကမှ အမျိုးသမီးထုကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Single သက်တမ်း ကြာ မြင့် နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဆယ်လီ လူပျိုသိုးကြီးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။သူတို့ တွေကတော့…. […]
အဆီတွေကြောင့် ဖောင်းနေတဲ့မျက်နှာလေးကို မခွဲစိတ်ဘဲ အဆီချပေးမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း(၅)မျိုး
အဆီတွေကြောင့် ဖောင်းနေတဲ့မျက်နှာလေးကို မခွဲစိတ်ဘဲ အဆီချပေးမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း(၅)မျိုး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲ လုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ မျက်နှာအတွက်ပါ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ မျက်နှာကလည်း တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ ကြွက်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲ အဆီတွေစုနိုင်ပြီး အဲ့ဒီလိုအဆီတွေရှိနေတာက မျက်နှာအသားအရေလျော့တွဲကျတာ၊ အရေးအကြောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာအသားအရေတင်းရင်းလှပဖို့၊ နုပျိုဖို့အတွက် မျက်နှာနဲ့သင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပျိုမေတို့အတွက် မျက်နှာမှာ […]
« 1 … 116 117 118 … 228 »